राष्ट्रको सिपाहीलाई खरिदारको जति पनि भाउ नदिने सेनापतिज्यू ? « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १६:०४
“भारतमा ०५८ सालमा १ सिपाहीको तलब ४ हजार हुँदा नेपालमा २७ सय थियो । भारतमा तलब बृद्धि हुँदा एकमुष्ट ५ र १० हजार हुँदै गयो र आज नेपाली जवानको भन्दा ३ गुणा बढी छ ।”
यतातिरजर्साब,चीफसाबहरूको ध्यान गएन । आजको महँगीमा १८–२० हजार तलबले आफ्नै
बालबच्चालाई शिक्षा–दीक्षा दिन र परिवारको पालनपोषण गर्न कति कठिन होला ? गाउँमा बच्चा पढाउने स्कूल घण्टौँ हिँड्दा पुगिँदैन । आमपहाडी बस्ती उजाड हुँदै गएर स्कूल पनि कोल्याप्स भइरहेका छन् । शहर बजारमा बाँच्ने कसरी ?
“एउटा सिपाहीलाई दैनिक ज्याला दारी लेबरको जति पनि नहुनुजस्तो दुःखद अरू के हुन सक्छ ?”
(तल्लो दर्जाका पीडित जवानहरूबाट आएको पत्र ।)
#आर्थिक अवस्था कमजोर